2013 January | MoeMaKa Burmese News & Media
သန်းဝင်းလှိုင် ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းသည် အင်္ဂလန်မှ တစ်ဘစ်ဂျာနယ် ကို အတုယူ၍ မြန်မာ့ဗျူဟာကိုထုတ်ဝေသည် ဟုသိရသည်။ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁) တွင် “မြန်မာ့ကျွန်းအောင်ချာ၊ အောင်ချာ...
မိုးမခအထောက်တော် ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ် ချောင်းသာကမ်းခြေအနီး အခြေခံပညာာမူလတန်းလွန်ကျေင်းသို့၂၈. ၁. ၂၀၁၃ နေ့ က ရွှေတွံတေးဆရာတော် ကြွရောက်ခဲ့သည်။ ကျေင်းသူကျောင်းသား ၅၀၀...
ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ● ကျမ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတွေ အားလုံးထဲမှာ ဒီအခမ်းအနားကတော့ စိတ်ကို အလှုပ်ခတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အားတက်စရာအကောင်းဆုံးပါဘဲ ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အားကစားသက်သက်ကိုသာ ကျင်းပနေတာမဟုတ်ဘဲ အရာအားလုံးထက် ပိုအရေးပါတဲ့လူ့သားရဲ့ စိတ်...
လက်ရှိမြန်မာ့အရေး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ အမြင်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏အမြင် တရားပွဲများပိတ်ပင်ခံရမှုအပေါ်ရွှေည၀ါဆရာတော်အမြင်
ကာတွန်း စောငို – ၂/၈၈ မလိုဘူး၊ ဆက်လုပ် …
ကာတွန်း စောငို – ၂/၈၈ မလိုဘူး၊ ဆက်လုပ် … ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ (Cartoon Saw Ngo – Regime withdrew 2/88 but still...
ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃။ Yangon Press International (Facebook) လောင်းကစားစာရင်းတွေမှတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ မမ်မိုရီစတစ်ကိုမြိုချလိုက်တဲ့ အသက်ငါးဆယ်ကျော် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့သမီးနဲ့အတူ မနေ့က အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမှတ်(၉) ရဲစခန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကနေ...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – မြို့မေတ္တာခံယူသူဂျီးပေမို့ … ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ (Burmese smokes in front of Regime’s Congress man coz they cannot...
မောင်စံ (သီတဂူ) ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ “ဆွမ်းတော်…ဗျို့” “ဟောတော် ဆွမ်းခံတောင် ရောက်လာ ပြီ၊ ဒုက္ခပါပဲ” ဆွမ်းတော်သံ ကြားလိုက်ရ သည်နှင့် ညိုထွေးစိတ်ထဲ ဗလောင်ဆူ သွားသည်။ ရင်တွေလည်း တဒိတ်ဒိတ်...
မအူပင်အထောက်တော် ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊၂၀၁၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် (၉-၁၂-၂၀၁၂) နေ့၊ နံနက် (၃) နာရီ အချိန်ခန့်၌ အလှည့်ကျ ကင်းသား ရဲတသ စိုးမိုးထွန်းအား အချုပ်ကျတရားခံများက ငွေ (၁၀)သိန်းရမည်...
ကျော်ဟိန်း (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ဟံသာဝတီရိပ်မွန်အိမ်ရာမိသားစု၏ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဆွမ်း သိမ်းအောင်ပွဲအဖြစ် စာပေဟောပြောပွဲနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ...
ကာတွန်း – ဆလိုင်းစွမ်းပီ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃
နှင်းမှုန်တွေကြားက တရုတ်ပြည်ကြီး – အပိုင်း (၁)
ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU) ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ နေတွေ၊ လတွေ၊ ကြယ်တာရာနက္ခတ်တွေနှင့်အလှဆင်ထားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို မျက်လွှာပင့်ပြီး မော့ကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…။ မှိန်မယောင် ယောင်နှင့် လင်းနေကြတဲ့ကြယ်တွေ၊ လင်းမယောင်ယောင်နှင့် မှိန်နေကြတဲ့ ကြယ်တွေကို အံ့သြစွာ တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။...
တရုတ်ပြည်သို့ အဆိုပြုလွှာ သီဟသူရ် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ပြန်လော့ဝမ်ဘောင် အမောင်ပြန်လော့ ပြန်ပေတော့။ ဆည်းလည်းခတ်သံ ဒို့ကြေးသံသည် ကျည်ဆံမဖြစ်ထိုက်ချေတကား။ သီဟသူရ်
ပြည်နယ်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအား အကျိုးအမြတ် ခွဲပေးမည် ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ် သတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ပြည်နယ်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဒေသခံတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောတူ လက်ခံမှုရှိမှသာ ဆောင်ရွက်သွားမည့်အပြင် အကျိုးအမြတ်လည်း ခွဲဝေပေးမည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု...
သက်ဆိုင်သူမှ သက်ဆိုင်သူသို့ – Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၅၆) မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်း ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏ အသံလွှင့်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြသည်။ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်...
မန္တလေးက ဆွမ်းအလှူရှင် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၃